Olee otú onwe elu Enough Space maka iOS 8 ọjọọ
Esi Enough Nchekwa na iPhone / iPad / iPod aka Wụnye iOS 8
"Nke a update-apụghị arụnyere n'ihi na ọ na-achọ dịkarịa ala 4.6 GB nke nchekwa." Ọ bụ ezie na kpọmkwem nchekwa chọrọ maka dị iche iche iPhones, iPads, na iPod aka dị iche iche, ihe karịrị 75% iOS ngwaọrụ ọrụ ndị na-agbalị nweta nkwalite ka iOS 8 nwere ma ọ bụ ga-aka ná ntị. Lee, m chọrọ ịgwa gị na tupu kwalite ka iOS 8, biko mee ka n'aka na i nwere ohere:
Ọ dịkarịa ala 2GB nchekwa na ngwaọrụ gị ma ọ bụrụ na ị na-aga nweta nkwalite ka iOS 8 site na iTunes;
Kwadebe dịkarịa ala 6GB nchekwa na gị iOS ngwaọrụ ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ime iOS 8 update na na ngwaọrụ gị (n'elu ikuku);
Gịnị mere ihe ndị a chọrọ maka nchekwa dị iche iche maka upgrading ka iOS 8 site na iTunes na ngwaọrụ ozugbo?
Ebe a bụ azịza: mgbe upgrading ka iOS 8 site iTunes, na iOS 8 echichi ngwugwu ga-ebudatara site na iTunes na-azọpụta na kọmputa gị. Na iTunes ga itopusi echichi ngwugwu na na kọmputa gị. N'ihi ya nweghị ohere na-na-arụ na gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka ruo mgbe iOS 8 arụnyere. Na dum iOS 8 sistemụ naanị na-achọ ihe karịrị 1GB. Ọ bụrụ na ị na-eme iOS 8 update n'elu ikuku, m pụtara, na gị na iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod aka ozugbo, mgbe ahụ, ị nwere kwadebe mmezi ohere na gị iOS ngwaọrụ ịzọpụta echichi ngwugwu nakwa dị ka ohere maka unpacking. Ọ bụ ya mere ndị ọzọ nchekwa na-mkpa mgbe upgrading ka iOS 8 na na ngwaọrụ gị. Ọ bụrụ na ị na-adịghị nke ukwuu nchekwa na gị iOS ngwaọrụ, ị na-kwesŽrŽ kwalite ka iOS 8 site na iTunes, ọ bụghị n'elu ikuku (na na ngwaọrụ).
Agbanyeghị, ma ị na-aga nweta nkwalite ka iOS 8 site na iTunes ma ọ bụ n'elu ikuku, unu ga-akwadebe free nchekwa. The ike akụkụ bụ otú ọcha iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod aka ka onwe elu karịa ohere maka iOS 8 update ebe e nwere ọtụtụ ngwa ọdịnala na mkpa data. Ọ bụrụ na ị n'ezie amaghị ihe na-eme, na-eso nzọụkwụ n'okpuru-ezu nchekwa maka iOS 8 update.
Nzọụkwụ onwe elu Space maka iOS ngwaọrụ eme iOS 8 Update
Nzọụkwụ 1. Hichapụ ejibeghi ngwa
Enweta na ihe ọ bụla nke ngwa gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka ruo mgbe niile na ngwa ọdịnala wigul. Pịa X nnọchianya na elu ekpe nke ejibeghi ngwa ka ihichapụ ndị a ngwa ọdịnala otu-site na otu. Ọtụtụ ndị kwuru na ha nwere ọtụtụ nke, ma ọ bụ ruo ihe karịrị 100 ngwa arụnyere na ha iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod aka. Na n'ezie na-ewe nke ukwuu ohere. Ọ bụrụ na ị na-adịghị eji ụfọdụ ngwa ugbu a, ihichapụ ha mbụ. Mgbe e mesịrị, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ha ọzọ, ke App Store zụrụ ebe, chọta ibudata ha ọzọ.
Nzọụkwụ 2. ndabere foto na video
Ị kwesịrị ị na nkwado ndabere na mpaghara foto na video ị na weghaara si gị iOS ngwaọrụ gị na kọmputa, na mgbe ahụ ihichapụ mbipụta na gị iOS ngwaọrụ. Ị maara, ọ bụla dị elu-definition video nwere ike ogide ole na ole MB nchekwa. Nkwado ndabere na mpaghara foto na vidiyo si iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka ka kọmputa, ị nwere ike na-agbalị Wondershare TunesGo ka a usoro enyemaka ị na-eme ya nsogbu unu kpamkpam.
Download Wondershare TunesGo free ikpe mbipute!
Nzọụkwụ 3. Nhichapụ ozi ederede na iMessages
Ozi, karịsịa mkparịta ụka ndị a na e dere nnukwu ozi Mgbakwụnye na-ukwuu ohere. Ị kwesịrị ị na ihichapụ achọghị mkparịta ụka onwe elu ohere maka iOS 8 update.
Nzọụkwụ 4. Iji Wondershare SafeEraser wepụ faịlụ site na gị iPhone, iPad, na iPod aka na ị pụghị ịhụ anya.
Wepụ junk faịlụ site na gị iOS ngwaọrụ. E nwere ọtụtụ junk faịlụ, dị ka log faịlụ, foto na vidiyo cache, iTunes syncing cache, download temp faịlụ, ngwa cache, ngwa kuki na ngwa temp faịlụ. M na-anwale ọrụ a na kpochara elu karịa 500MB nchekwa. Otu n'ime ndị ọrụ ibe m gbalịrị ya na kpochara 1GB nchekwa. Ọ na-adabere na gị iOS ọnọdụ maka otú ihe ohere ọ tọhapụrụ.
Na-adịgide adịgide ihichapu ehichapụ faịlụ site na gị iOS ngwaọrụ. Files na ị na-ehichapụ, dị ka ozi ederede na photos, na-adịghị arahụ ozugbo. Ha na-adị ebe gị na ngwaọrụ ma apụghị ịhụ anya. Nke a software ga iṅomi ma gosipụta ndị a faịlụ na ka ị na-ewepụ ha selectively.
1. Wụnye na ẹkedori omume na kọmputa gị. Jiri eriri USB jikọọ gị iOS ngwaọrụ gị na kọmputa.
2. Ke isi window, pịa kwekọrọ ekwekọ button: 1-Pịa nzacha na mkpocha (n'ihi na-ewepụ junk faịlụ), ihichapu Private Data (wepụ search akụkọ ihe mere eme, Safari akụkọ ihe mere eme, na-akpọ akụkọ ihe mere eme, na ndetu, foto, wdg), ma ọ bụ ihichapu ehichapụ faịlụ ( maka faịlụ i ehichapụ).
3. Mgbe iṅomi, ego faịlụ na ị chọrọ iji wepụ na pịa 'ihichapu Ugbu a' iji wepụ ha kpam kpam site na gị iOS ngwaọrụ.
Nweta nkwalite iOS 8 on iPhone / iPad / iPod aka
4 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara iPhone tupu iOS 8 ọjọọ
Naghachi SMS si iPhone mgbe iOS 8 ọjọọ
Nyefee faịlụ site Android ka iPhone 6
1 Pịa Detuo Data si iPhone ka iPhone 6
Otú nyefee data si Huawei ka iOS ngwaọrụ
Olee otú mbupụ na Bipute Facebook ozi na iOS
Olee otú iji weghachi iPhone Data mgbe iOS 6 Update Crash
> Resource> iOS> Olee otú iji Hichaa iPhone / iPad / iPod aka Wụnye iOS 8